ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 732
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – သမ္မတကြီးကို သင်းချိုင်းကုန်းမှာ ထားရစ်ခဲ့ မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
သန်းဝင်းလှိုင် မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ● တောင်ငူခေတ် (ခရစ်နှစ် ၁၅၂၇ – ၁၅၉၆) တောင်ငူခေတ်တွင် မြန်မာကဗျာသည် အတော်ပင် အခြေခိုင်ခံ့နေပေပြီ။ ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်တို့မှ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာသော မြန်မာကဗျာအင်အားစုသည် အလွန်ကြီးမားသော အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေသည်။ တောင်ငူခေတ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာသော ကဗျာစာဆိုများမှာ လှော်ကားသုံးထောင်မှူး၊ ရှင်ထွေးနာသိန်၊ ပြည်န၀ဒေးကြီး၊ ရဝေရှင်ထွေး၊ နတ်သျှင်နောင်၊ မင်းဇေယျရန္တမိတ်၊ ရှင်သံခိုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ဖွဲ့ဆိုရေးသားခဲ့ကြသော ကဗျာလင်္ကာစာပေများ မှာ လှော်ကားသုံးထောင်မှူး၏ မင်းတရားရွှေထီးဧချင်း၊ မင်းတရားရွှေထီးနားတော်သွင်း၊ ရှင်ထွေးနာသိန်၏ အင်းဝမြို့သို့ တမ်းတရတုပိုဒ်စုံ၊ ပြည်န၀ဒေးကြီး၏ မိုးဖွဲ့၊ တောဖွဲ့၊ ပန်းဖွဲ့၊ ပြည်ဖွဲ့၊ နန်းဖွဲ့၊ စစ်ချီမောင်ဖွဲ့၊ ဘုရားတိုင်မယ်ဖွဲ့၊ မောင်ဖွဲ့၊ အမေးအဖြေရတု၊ ကျေးစေရတု၊...
ကာတွန်း – လုိုင်လုဏ် မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
သားကြီးမောင်ဇေယျ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ပန်းချီ – မောင်ငွေထွန်း နောက်ဆုံးတော့ အိပ်မက်တွေဟာ ကျနော့်မျက်စိရှေ့ကို ရောက်လာပါတော့တယ်။ မှိုင်း အမှတ်တရနေ့တဲ့။ ဆရာကြီးရဲ့ ၁၃၇ နှစ်မြောက်မွေးနေ့။ တရားဝင်ကျင်းပမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဘ၀တွေပေးဆပ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ရတာတွေ၊ အခုတော့ ရပါပြီ။ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့ပြီ။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ိုးတ၀ါးပါ။ စမ်းချောင်း ပုဒုမ္မာ ကွင်းမှာ မှန်အခေါင်းနဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မိူင်း ရုပ်ကလ္လာပ် ။ လူပ်လူပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်တွေ။ အုပ်စုလိုက် လာပြီးအလေးပြုနေတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ၊ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းကျောင်းသားတွေ။ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေလွှင့်လို့၊ ကျောင်စိမ်းလုံခြည်တွေဝတ်လို့။ ...
နောင်တ မာမာအေး မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၃ ယခုလဆန်းပိုင်း ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏ အသံလွှင့်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြသည်။ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် …မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ … ဒီကနေ့ဟာ မှတ်မှတ်ရရ မတ်လ ၄ ရက်။ US မှာ ကျတဲ့နေ့ပါ။ ချစ်ရသူတွေနေတဲ့ဆီက ပြန်ရောက်လာရတဲ့နေ့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မာအေး အသံလွှင့်တဲ့ရက် မဟုတ်ပါဘူး။ မာအေးက စိတ်ရှုပ်နေရင် အလုပ်တခုခု ရှာပြီး လုပ်နေရင်းနဲ့မှ ပြေပျောက်အောင် ရှင်းရတတ်တဲ့ အထုံက ပါနေလို့ ဒီနေ့ အကြောင်းကို ပြောပြရအောင် ညကြီးမင်းကြီး နှင်းတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတါကို...
ကာတွန်း – လုိုင်လုဏ် မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း – ဆလုိုင်းစွမ်းပီ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကမာပုလဲ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၃ ဆင်တကောင်ဟာ သူသွားတိုင်း လမ်းဖြစ်ရမယ် ... စိတ်ကြီးဝင် သွေးနားထင် ရောက်တဲ့အခါ ... ။ ချစ်သူဆင်အုပ်ကိုခွာ ရန်သူ့တော နက်နက်ထဲ တိုးဝင် သူ့အတ္တအတွက် အင်ကြင်းပန်းတွေ ခူးဖို့ ...။ အဲဒီ ရန်သူ့ တောအုပ်ထဲမှာ ... သူသွားလေရာ လမ်းဖြစ်သွားတယ် သူသွားလေရာ လမ်းဖြစ်ခဲ့တယ် သူသွားလေရာ လမ်းဖြစ်နေတယ် လမ်းတွေဟာ တလမ်းပြီး တလမ်း လမ်းတွေဟာ တောနက်ထဲမှာ ၀င်္ကပါပတ် လမ်းတွေ ... လမ်းတွေ ... လမ်းတွေထဲမှာ လမ်းမှောက်နေတဲ့ ဆင် ... လမ်းတွေထဲမှာပဲ လမ်းပျောက်ခဲ့ရပြီ ...။ ဖနှောင့်မှာ စူးကနဲ မျက်ကနဲ မျက်လုံးအမြင်တွေလည်း စုံလုံးကန်း နှလုံးအိမ်ထဲ...
ကာတွန်း စောငို – ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ
ကာတွန်း စောငို – ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
နိုင်ငံရေးပဲ လုပ် လုပ် ဇာတ်ပဲ က က ပြည်သူချစ်ဖို့ လိုသည် – Tu Maung Nyo
နိုင်ငံရေးပဲ လုပ် လုပ် ဇာတ်ပဲ က က ပြည်သူချစ်ဖို့ လိုသည် တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၆ ရက်) (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရနှင့် အာဏာအမွေခံ (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဒီချုပ်ကို ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းရမည့်ဗျူဟာနှင့်ပရိယာယ်ပေါင်းစုံရှိသည်။သတင်းစာများတွင်အပုတ်ချဆောင်းပါးများရေးသားဖေါ်ပြသည်မှအစ၊ အိမ်ချုပ်ချခြင်း၊ ထောင်ချ ခြင်းများအလယ် ဒီပဲယင်းတွင်အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်သည်အဆုံး အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ လက်မရွံ့သူတွေပေါလှသည်။ ယခုတစ်ခေါက် လက်ပံတောင်းဒေသသို့ သွားသည့်ခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သည် “မီးလောင်ဗုံး” ကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို“မီးလောင်ဗုံး”အဖြစ် (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရက လှလှကြီးအသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “အသုံးချ ခံမည်”ဟု တဖွဖွပြောဆိုနေသဖြင့် ကြုံကြိုက်တုန်း အသုံးချလိုက်ပုံရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မျက်လုံး၊စကားလုံးများ၊ ဟန်ပန်အမူအရာများသည် လက်ပံတောင်းဒေသခံ ပြည်သူများ၏အသည်း နှလုံးကို အလျှံညည်းညည်းလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုသို့သောမီးလောင်မျက်လုံး၊ မီးလောင်စကားလုံးများ၊ မီးလောင်ဟန်ပန် အမူအရာများကို ယနေ့ခေတ်မီ...
Page 732 of 832«1...730731732733734...832»